Zavamaniry maina, fitaovana fampifangaroana, Fitaovana PC - Shantui
Endri-javatra 1.Fivoriambe sy fandroahana mora vidy, fivezivezena avo lenta, mety sy haingana, ary toerana mora lenta adaptability. 2.Compact sy rafitra mety, famolavolana modularity avo; 3.Ny fandidiana dia mazava ary ny fampisehoana dia milamina. 4.Ny fanjanahanaana tany, famokarana be; 5.Ny rafitra elektrika sy ny rafitra gazy dia manana fahamendrehana avo lenta sy avo. Ny zavamaniry fampifangaroana simenitra finday dia fitaovana famokarana beton izay mampifangaro ny tahiry materialy, mandanja ...
Endri-javatra 1.Fivoriambe sy fandroahana mora vidy, fivezivezena avo lenta, mety sy haingana, ary toerana mora lenta adaptability. 2.Compact sy rafitra mety, famolavolana modularity avo; 3.Ny fandidiana dia mazava ary ny fampisehoana dia milamina. 4.Ny fanjanahanaana tany, famokarana be; 5.Ny rafitra elektrika sy ny rafitra gazy dia manana fahamendrehana avo lenta sy avo. Fomba famaritana SjHZS025Y SjHZS040Y SjHZS050Y SjHZS075Y Famokarana teorika m³ / h 25 40 50 ...
Endri-javatra 1. Firafitra maimaim-poana amin'ny fototra, ny fitaovana dia azo apetraka amin'ny famokarana aorian'ny fisavoritahana sy hamafisana ny toeran'ny asa. Tsy mampihena ny vidin'ny fananganana ifotony fotsiny, fa mampihena ny tsingerin'ny fametrahana. 2.Ny famolavolana modular ny vokatra dia mahatonga azy io ho mora sy haingana hisintona sy hitatitra. 3. Firafitra matevina amin'ny ankapobeny, tsy dia be loatra ny fananan-tany. Mode famaritana SjHZN025F SjHZN040F SjHZN050F SjHZN075F SjHZS050F SjHZS075F SjHZS100F SjHZS150F Ny ...
Endri-javatra Ilay zavamaniry dia misy rafitra famonoana, rafitra fandanjana, rafitra fampifangaroana, rafitra fanaraha-maso herinaratra, rafitra fanaraha-maso pneumatika sns sns agregates, vovoka, aditifa misy rano ary rano dia azo esorina ary afangaro amin'ilay zavamaniry. Ny agregates dia nampidirina mba hamory ny fitoeram-bokatra tamin'ny alàlan'ny loader teo aloha. Ny vovoka dia ampitaina avy amin'ny silo ho amin'ny lanjany mavesatra amin'ny alàlan'ny conveyor .Ny rano sy aditifan'ny rano dia alefa amin'ny mizana. Ny rafitra fandanjana rehetra dia mizana elektronika. Mandeha ho azy tanteraka ny zavamaniry ...
Shantui Janeoo Machinery Co., Ltd. no famokarana voalohany ny fampifangaroana beton sy ny masinina fitaterana ho an'ny orinasam-panjakana lehibe, dia ny CREC, CRC nandritra ny taona maro mpiara-miasa stratejika, ilay fototra fampifangaroana beton, zavamaniry fampifangaroana asphalt, maina mifangaro Mortar zavamaniry, zava-maniry mifangaro amin'ny orinasa avo lenta, paompy mitaingina fako, fitaovana fanariana fako ary mixer isan-karazany.
Fotoana fanamboarana: Oktobra 2020 Fampiharana fampiharana (karazana injeniera): fanamboarana an-tanàn-dehibe Fitaovana: fitaovana fampifangaroana beton Fampiharana: Tamin'ny 9 Oktobra 2020, taorian'ny andro maro fametrahana sy fitarihana lavitra, Shantui Janeoo Marine SjHZS75-3E fitaovana fampifangaroana vita amin'ny beton .. .
Fotoana fanamboarana: septambra 2020 Saha fampiharana (karazana injeniera): fambolena, ala ary fiarovana ny rano Karazan-fitaovana: fitaovana fampifangaroana simenitra SjHZS90-3B silo simenitra no Silo taloha an'ny mpanjifa. Fampiharana: Tamin'ny volana septambra 2020, ny zavamaniry roa miady amin'ny beton SjHZS090-3B an'ny Shantui J ...
Ny zavamaniry mampifangaro beton-dranomasina Shantui Janeoo SjHZS75-3E dia nahavita ny famokarana entana mavesatra tamin'ny 9,2020 Oktobra. Nandritra ny torolàlana lavitra, dia manokatra lalana hamoronana lanja ho an'ny mpanjifa ao Myanmar. Voakasiky ny toe-javatra valanaretina, tsy afaka mandeha any amin'ny ...
Shantui Janeoo dia mahatratra ny varotra am-pitan-dranomasina any ivelany, na zavamaniry famaohana na kamio mixer
Vao tsy ela akory izay, orinasa mpanao famokarana simenitra Shantui Janeoo 2XSjHZS120-3B sy kamio 10-metatra toradroa vita amin'ny mixer no nalefa soa aman-tsara tany Filipina, ary hanomboka tsy ho ela ny serivisy fanampiana ny tetikasa fananganana Metro Manila. Ao amin'ny tranokala fanaterana, mpikambana ao amin'ny vita ...
Shantui Janeoo dia manolotra tetik'asa fanamboarana lalamby Shiheng Canggang
Vao tsy ela akory izay, ny seta enina an'ny SjHZS240-3R zana-kazo fampifangaroana izay ampiasain'i Shantui Janeoo amin'ny fanamboarana ny lalamby Intercity Shiheng-Canggang dia napetraka ary natolotra am-pahombiazana tamin'ny mpanjifa. Ny fitaovana rehetra dia mandray ny firafitry ny silo vita amin'ny simenitra, ary ny fitaovana tsirairay avy dia ...